Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း)
Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ခြေလက်တစ်ခုလုံး (သို့) ခြေလက်အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လက်ချောင်း၊ခြေချောင်းများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကုသမှုမျိုးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ နဲ့ရောဂါဝေဒနာ၊ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေကို ကုသဖို့နဲ့ အရိုး၊ကြွက်သားတွေကနေ အကျိတ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် နောက်ဆုံးနည်းလမ်း တစ်ခုအနေနဲ့သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း) က အဖြစ်များသလား။
ဒီလိုဖြတ်တောက်ပစ်ရခြင်းတွေဟာ အလွန် အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေထက်အမျိုးသားတွေမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ရခြင်းဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အသက်၇၀နဲ့ အထက်တွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေတဲ့ အကြောင်းတွေကို လျော့ချပြီးတော့ ရောဂါကို စီမံနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုသည်များအတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း) ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ
ခြေလက်များ ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းဟာအောက်ပါ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• နှလုံးရောဂါ။ ခန္ဓါကိုယ် တစ်ခုလုံးဆီကို သွေးတွေရောက်အောင်နှလုံးက မညှစ်နိုင်တော့တဲ့ ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ခြင်း နဲ့ နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း ကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ခွဲစိတ်သောနေရာတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း။
• နောက်တစ်ခါ ထပ်မံ ခွဲစိတ်ဖို့လိုခြင်း
အထက်ဖော်ပြပါစာရင်း ထဲမှာမပါတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ အထက်ဖော်ပြပါအချက်တွေထဲက တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်မှာအထက်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီပြသသင့် ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာမတူညီကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အခြေအနေအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကို သင့် ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းသာလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
• ထိခိုက်တဲ့ခြေ၊လက်တွေဆီကို ထောက်ပံ့တဲ့သွေးလည်ပတ်မှုတွေ ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဖြတ်ပစ်ရတတ်ပါတယ်။
• ခြေလက်တွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာလည်း ဖြတ်တောက်ပစ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
• ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား (၁) နဲ့ အမျိုးအစား (၂) ခံစားနေရသူများတွင်လည်း သွေးတွင်း အချိုဓါတ်များသောကြောင့် သွေးကြောတွေပျက်စီးပြီး ဖြတ်ပစ်ရတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
• သွေးကြောအဆီဖုံးခြင်းနှင့်ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ထိခိုက်မိခြင်း (ဥပမာ ယာဉ်တိုက်မိခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း)
• ခြေ၊လက်တွေရဲ့ အရိုးနဲ့ကြွက်သားထဲမှာရှိတဲ့ အကျိတ်တွေကြောင့်လည်း ဖြတ်ပစ်ရတတ်ပါတယ်။
• ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်း သ့ိုမဟုတ် အခြားကုသမှုများနှင့်လည်း ကုသ၍ မရတော့သော ပြင်းထန်သော ကူးစက်မှုများတွင်လည်း ဖြတ်တောက် ပစ်ရတတ်ပါတယ်။
• အာရုံကြောအကျိတ်လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောထူလာခြင်း နဲ့ နှင်းကိုက်ခြင်း တွေမှာလည်း ဖြတ်တောက်ရတတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Amputation (ခြေလက် ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ-
• အသက်၇၀နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ
• ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေထက် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်
• ပထမတစ်ခါ ဖြတ်တောက်ဖူးခြင်း (ဒူးအပေါ်ပိုင်း ဖြတ်တောက်ရတာတွေဟာ အောက်ပိုင်းဖြတ်တောက်ရတာတွေထက်ပိုပြီး ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ အန္တရာယ်များပါတယ်)
ခြေလက်ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း အတွက် ဘယ်လို ရောဂါ ရှာဖွေ အတည်ပြုသလဲ။
ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ ဖြတ်တောက် သင့်သောအပိုင်းကို ရှာဖွေဖို့အတွက် များစွာသော စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့-
• ခြေ၊လက်တွေရဲ့မတူညီတဲ့နေရာတွေမှာ သွေးဖိအား တိုင်းတာခြင်း
• ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ xenon ကိုသုံးပြီး သွေးစီးဆင်း မှုကိုတိုင်းတာခြင်း
• အရေပြားအောက်ရှိ အောက်စီဂျင်ဖိအားကို တိုင်းတာခြင်း
• အရေပြားရှိ သွေးကြောငယ်လေးများမှ သွေးစီးဆင်းမှုကို laser doppler နှင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
• သွေးပေါင်ချိန်တိုင်း ကိရိယာဖြင့် ဖြစ်စေ လျှပ်စစ်ပုံရိပ်ဖမ်းသော စမ်း သပ်ကိရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ အရေပြားရှိသွေးစီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာ ကြပါတယ်၊
• အရေပြား အပူချိန်ကိုလည်း သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အလင်းတန်း များကိုအသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးကြပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကုသခြင်းခံယူရာတွင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးများကို လိုအပ်လျှင်အသုံးပြုပါ။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံများ ခံယူရပါမယ်။ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခြေလက်များဆန့်ခြင်း၊ အထူးလေ့ကျင့်ခန်း များပြုလုပ်ခြင်း၊ လက်တွန်းလှည်း ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သင့်ရဲ့ကျန်သောခြေ၊လက်များတွင် အလေးဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ သင့် ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ခန္ဓါကိုယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စီစဉ်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က သင့်အားညွှန်ကြားထားသည်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ခွဲစိတ်ထားတဲ့ နေရာကို ဂရုစိုက်သော နည်းလမ်းများ၊ ရေချိုးခြင်း၊ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
နာကျင်မှုများအတွက် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကိုသောက်ရပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကိုပြောပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ခွဲထားသောနေရာ မှ ပူခြင်း၊ ရောင်ခြင်း ၊သွေး သို့မဟုတ် အခြားအရည်များ ထွက်လာခြင်း
• ဖြတ်တောက်ထားသော နေရာပတ်လည်တွင် ပို၍ နာကျင်လာခြင်း
• ကျန်ရှိနေသော ခြေထောက် သို့မဟုတ် လက်အပိုင်းမှာ ထုံနေခြင်း သို့မဟုတ် အပ်စူးသလို နာကျင်မှုခံစားရခြင်း
Amputation Overview. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/definition-amputation. Accessed July 15, 2016.
Limb Salvage and Amputation for Vascular Disease. http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(12)65370-1/abstract. Accessed July 15, 2016.
Weil’s disease (ဝိုင်းလ်ရောဂါ )
Gout (ဂေါက် ရောဂါ )